Inona ny VSCO, ny fampiharana fanovana sary miaraka amina vondron'olona lehibe | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, sary
VSCO dia fampiharana fanovana sy sivana an-tsary indrindra, fa manararaotra ihany koa ny maha-vondrom-piarahamonina misy mpaka sary matihanina na mpankafy. Traikefa amin'ny sary mampiasa rindranasa miaraka amina interface tokana sy manome ny mpampiasa traikefa hafa amin'ny hafa.
Ary io lafiny io no angamba ny kileman-tànany lehibe indrindra amin'ny fampiharana finday, nanomboka mandra-pahatonganao mihazona ny sary masina sy ny interface misy azy, dia mety hitarika anao hidina amin'ny làlan'ny mangidy Alohan'ny asa izay ataontsika amin'ny fampiharana hafa amin'ny jiffy. Andao ataontsika amin'ny VSCO, fampiharana ho an'ireo izay maniry ny hahazo io kalitao io amin'ny sariny.
1 Inona ny VSCO
2 Manao ahoana ny fampiharana finday
2.1 Feeds na Vaovao
2.2 Mba hahitana
2.3 Ny fandalinana
2.4 Ireo sivana
3 Famandrihana VSCO
4 Sintomy ny VSCO amin'ny findainao
VSCO Cam, araka ny tena niantsoana azy, dia a fampiharana natokana ho an'ny sary miaraka amin'ny horonan-tsary. Ny sivana no tena nahatonga ny maro hanakaiky ny morony mba hankafizany ny fikitika matihanina izay hita miharihary avy amin'ny segondra voalohany nanombohantsika ny zavatra niainantsika niaraka taminy.
Ankoatry ny sivana tsy maintsy manana ny fiarahamonina sy ny fahaizana mamoaka ireo sary namboarina isika mba hahafahan'ny hafa manaraka antsika, manome hevitra ary mamporisika antsika hanohy ny diantsika amin'ny fakana sary.
Araka ny efa voalaza etsy ambony, VSCO koa dia miavaka amin'ny traikefa faran'izay kely indrindra amin'ny mainty sy fotsy, ary ireo antsipiriany izay mahatonga azy io ho zavatra tena miavaka rehefa vita amin'ny sariny, fihetsika ary fifandraisana hafa ny olona.
Izany no antony fampiharana ity nivadika ho traikefa tsy manam-paharoa izay nampiana tsikelikely ireo mpampiasa nandritra ny taona maro. Marina fa lasa mihasarotra hatrany ny misongadina amin'ity karazana fampiharana ity, ka ny VSCO mihitsy dia efa manana ny habaka ananany.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny VSCO ary mampiavaka azy dia izany Raha mamoaka sary ao amin'ny fiaraha-monina izahay dia hiseho ny sivana efa nampiasaina mba hahafahan'ny hafa mamerina azy. Midika izany fa ao anaty vondrom-piarahamonina iray isika izay ifampizarana teknika sy fahendrena miaraka amin'izay.
Manao ahoana ny fampiharana finday
VSCO dia manana ny tanjany amin'ny fampiharana finday izay maimaim-poana, na dia izany aza Manana micropayments hahafahany mahazo famandrihana isam-bolana na isan-taona, na mandoa fotsiny ny fonosana sivana avo lenta. Ireto fonosana sivana ireto indraindray dia amidy na maimaim-poana, koa raha matetika ianao dia tafiditra ao amin'ny VSCO, na ho ela na ho haingana dia hahazo sivana tsara kokoa.
fa andao hifantoka amin'ny lafiny lehibe amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny faritra ilaina indrindra.
Feeds na Vaovao
Rehefa nidina voalohany tao amin'ny rindrambaiko VSCO ny iray, dia namaky ny news feed izay ahitanay ireo sary na sary navoakan'ireo izay manaraka anay, na ireo izay naroson'ny VSCO. Miorina amin'ny tena izy io fahana vaovao io ary miasa toy ny rindrina maro ihany na fandaharam-potoana avy amin'ny rindranasa hafa na tambajotra sosialy.
Araka ny efa nolazainay, avy amin'izany Fahanana izany dia afaka mahita ny preset na sivana ampiasaina amin'ny sary, noho izany dia lasa loharanon'ny fahendrena tsy mety ritra ny mampihatra ny tenantsika ireo sivana tianay; lojika dia misy ny fahafahantsika maka sary tsara miaraka amin'ny fomba, fomba fijery, firafitra, loko ary maro hafa.
Ity fizarana miorina eo akaikin'ny News ity dia mitovy amin'ny heviny, na dia ampahany majika indrindra amin'ny rindrambaiko aza izy io, satria misy ireo fanangonana "voahidy", tenifototra mitovy amin'izany, ary mitondra antsika any amin'ny sokajy efa voasokajy ho an'ny saripika, ny natiora na ny sary an-drenivohitra.
Ny marina izay raha te hahafantatra ireo mpaka sary tsara indrindra ao amin'ny VSCO ianao, ity fizarana ity no voatondro. Raha ny marina, ny faharanitan-tsaina na AI an'ny fampiharana dia mandaitra ny vokany eto hitondra antsika amin'ny fanangonana avo lenta miankina amin'ny lohahevitra tadiavintsika. Ary io dia afaka mandany ora sy ora maro avelantsika hahagaga antsika ny hatsaran'ny fanangonana.
Ity no fomba raha niditra tao amin'ny habaka manokana natolotsika ny sary izahay fa te-hamerina hipetraka izahay, na mampiasa ny fakantsary VSCO haka azy ireo. Izany hoe, raha tsy mikasa ny hamoaka ny sarinay izahay na misy olona mahita azy dia io no tena axis an'ny fampiharana afaka mampihatra sivana sy manitsy sary.
Satria iray amin'ny sehatra lehibe ao amin'ny VSCO dia hazavainay:
Bokotra fandalinana: avy any ambony dia ho hitanao ny bokotra iray ahafahantsika manivana ny atiny ananantsika tao amin'ny studio mba hahitana ireo sary, horonan-tsary ary sary tsy novaina, tsy novaina, navoaka, tsy navoaka. Toy izany dia mamela antsika hanova ny volavolan-tsipika sary na mamono ireo tondro aza
Sarin'ny sary: ananantsika daholo ny sary nakarina, ary raha tsindrio iray dia afaka:
Avoahy amin'ny VSCO
Amboary: avy eto isika dia afaka mandeha manitsy maody miaraka amin'ny sivana sy ireo fitaovana fototra rehetra ananan'i VSCO
Bokotra fakana sary: mampiasa ny fakantsary VSCO ianao
+ Bokotra: ampio sary avy amin'ny tranombokin'ny findainao
Araka ny hitanao eto manana fidirana amin'ny fisoratana anarana VSCO koa izahay izay hohazavainay etsy ambany.
Ary mazava ho azy, iray hafa manasongadina ity fampiharana fanovana sary ity ny sivana. amin'ny preset mihoatra ny 200, maro no eo ambany fandoavam-bola, ho hitantsika eo ambanin'ny fanangonana ary manasa antsika hanasongadina ireo sarin-tsakafo na sahan-tany, na mazava ho azy ny saripika; kely ho Fomban'ny Adobe Photoshop Camera.
Ireo sivana ireo dia havaozina amin'ny sivana vaovao ary hahazo fampandrenesana momba izany ianao. Ary koa ny VSCO dia manana sivana manan-tsaina izay raha ampiasaintsika dia hihatra ilay mahatakatra fa mahasoa azy izany mankany amin'ilay sehatra. Mazava ho azy fa hampiasa Artigence Intelligence izy io hahatonga ny sary ho tonga lafatra.
Ankoatr'izay koa manana andiana fitaovana hanamafisana na hanatsarana ireo sary amin'ny fomba tanana rehefa nampihatra fomba iray izahay:
Ny fampiharana Manana fakan-tsary manokana izy io ahafahantsika manova ny fifandanjana fotsy, ISO ary mitifitra sary RAW mihitsy aza raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ianao ary avy eo afaka mamerina mamerina azy io. Ny teboka iray manan-danja dia ny ahafahantsika maka sary ireto sary ireto raha toa ny rindrambaiko hafa mamela ny fiatraikany tahaka izany fa avy eo.
Avy eto izahay dia manohana ny VSCO ho fampiharana izay kendrena ihany koa mamorona vondron'olona mpanaraka ny mombamomba anay miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary izay navoakanay.
Azontsika atao mihitsy aza mandroso ny sarin'ireo mpampiasa hafa hitazonana azy ireo ao amin'ny mombamomba anay, ary miasa izy io ho fampirantiana izay rehetra tiantsika, na an'ny antsika io na an'ny an'ny mpampiasa hafa na mpaka sary. Azontsika atao koa ny manome azy fikitihana manokana toy ny habaka hanehoana ny portfolio.
Mila miantehitra amin'izany ianao ampahibemaso ny mombamomba azy ary tsy hitanao akory hoe iza ny mpanaraka anao. Ary raha ny marina ary izy ireo koa tsy afaka mankafy na maneho hevitra amin'ireo sary napetrakay tao amin'ny mombamomba anay. Satria ny VSCO dia nanandrana tamim-pitiavana hatrany fa ity fizarana ity no mahomby indrindra raha tsy misy ny fitsaran'ireo mpampiasa amin'ny tiany.
VSCO dia manolotra traikefa fandoavam-bola feno izay mitarika antsika amin'ny:
Tranomboky feno miaraka amin'ny preset 200 mahery
Hsl- Ovao ny loko, ny saturation ary ny famirapiratry ny loko amin'ny HSL
Sarimihetsika X: taranaka preset vaovao VSCO
Fanovana horonan-tsary sy fiara-manidina- Sary vondrona, horonan-tsary ary endrika hamoronana collage mihetsika
Fanamby amin'ny sary isan-kerinandro
Votoatiny fanabeazana manokana
El Ny fandoavam-bola isam-bolana dia € 1,83 isam-bolana raha mankany amin'ny famandrihana isan-taona € 21,99.
Sintomy ny VSCO amin'ny findainao
Ny zavatra tsara indrindra momba ny VSCO dia tsy mila ny famandrihana mihitsy isika ary ny zavatra niainany dia tonga lafatra, satria tsy misy doka akory aza ary interface madio sy mahafinaritra izy io ary rehefa azontsika dia mety amin'ireo asa ireo.
Ianao dia afaka misintona avy amin'ny Google Play Store:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Inona ny VSCO, ilay fampiharana fanovana sary miaraka amina vondrom-piarahamonina mahafinaritra
Nangalarina ny findaiko. Inona no tokony hataoko?